3: D Lenticular Card ကို, သုံးဖက်မြင် Lenticular Card ကို, RFID 3D Proximity စမတ်ကဒ်, 3: D စတီရီယို Image ကိုကတ်, သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ် Card ကို, 3: D Image ကိုကတ်
လုံခြုံရေး ID ကဒ်
 » RFID Card ကို » Carfts Card ကို
3: D Lenticular Card ကို, RFID 3D Proximity စမတ်ကဒ်, 3: D စတီရီယို Image ကိုကတ်, သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ် Card ကို
Carfts Card ကို 3: D Image ကိုကတ်, 3: D Lenticular Card ကို, 3: D စတီရီယို Image ကိုကတ်, 3: D Stereoscopic ပုံများ, RFID 3D Proximity စမတ်ကဒ်, သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ် Card ကို, သုံးဖက်မြင် Lenticular Card ကို, သုံးဖက်မြင်ဓာတ်ပုံ
အဆိုပါ 3D ကဒ်လုပ်, ပုံရိပ်, ပုံတူများနှင့်ဓာတ်ပုံများ, သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပစ္စည်းများကို, ငါတို့သည်သင်တို့၏လှပသောစိတ်ကူးများနားလည်သဘောပေါက်.
ပစ္စည်း: Lenticular ပေ
3: D အကျိုးသက်ရောက်မှု: 3: D အကျိုးသက်ရောက်မှု,zoom ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှု,ကာတွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု,အကျိုးသက်ရောက်မှုလှန်ပေးသည်,အကျိုးသက်ရောက်မှု morph,စသည်တို့ကို.
အရွယ်: 8554 × 0.35mm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်×
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 80 ℃
3: D ကဒ်သုံးဖက်မြင်ပုံတစ်ပုံ mode ကိုအသစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, ကဒ်မျက်နှာပြင်မတူညီတဲ့ထောင့်ကနေမြင်နိုင်ပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကို, ၎င်း၏အလွန်ဖတ်လို့ရအောင်, ကြော်ငြာအံ့သြဖွယ် features. အဆိုပါကဒ်၏အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုနက်သုံးရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်, ထို့အပြင်တစ်ဦး zoom ကိုရှိနိုင်ပါသည်, ရွှေ့ပြောင်းခံရ, ပုံကိုပြောင်းလဲရန်, အရည်ပျော်၏အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, အထွေထွေပုံနှိပ်ခြင်းကဒ်ကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော. အနုပညာနျဖိုးထားဘို့မြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ရာအရပျ၏ပုံရိပ်ကိုသုံးနိုငျအဖြစ်, 3D နည်းပညာကိုသုံးနိုငျ. ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Non-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အရသာမရှိသော, အရည်အသွေးကောင်း, အမျိုးမျိုး, ကြီးမားသောအထွက်, မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျ. ဂရပ်ဖစ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်: 3: D, Flip, ပုံပျက်သော, zoom, 3: D + Flip, animation ရဲ့, ပေါကျကှဲ, Distort, compress, လှည့်, အကှေ့အကောကျနှငျ့ပို.
3D ဆန်ခါတစ်ချိန်တည်းမှာ PVC နှင့်အတူအလွှာပြုလုပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ် high-အပူချိန်, encapsulated စမတ်ကဒ် chip ကို, အဆက်အသွယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှု 3D စမတ်ကဒ်လုပျနိုငျ.
Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. , Ltd မှသုံးရှုထောင်ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်များအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် process နိုင်ပါတယ်, 3: D stereoscopic ပုံရိပ်တွေ, 3: D ပုံတူ.
3: D အကျိုးသက်ရောက်မှု
ပြင်ပအလွှာအပြင်အာကာသ၏အားကြီးသောသဘောမျိုးရှိပါတယ်, အားလုံးတ္ထုတစ်ခုအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ရှိ, အရာဝတ္ထုသူ့ဟာသူများ၏အသွင်သဏ္ဌာန် simulating, အမှန်တကယ်ကမ္ဘာပုံရိပ်တွေတစ်ဦးခြင်း simulation ကို.
3: D မှန်ဘီလူး Effect
ကိုကိုင်ပြီးသူမလက်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏အမြင်များပြောင်းရွေ့အဖြစ်, ကြီးမားသောအနေဖြင့်အသေးစားသို့မဟုတ်သေးငယ်ဖို့ကြီးမားတဲ့ screen ကိုမှ, တိုးတက်သောသို့မဟုတ်နောက်ပြန်, တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းခံစားမှုထုတ်လုပ်ရန်, ပြောင်းလဲနေသောသို့မဟုတ်ကာတွန်းဆိုးကျိုးများ,မီးမောင်းထိုးပြဘာသာရပ်နှင့်အလွန်ကောင်းသောမြှင့်တင်ရေးအခန်းကဏ္ဍအောင်မြင်ရန်.
3: D Animation ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကိုကိုင်ပြီးသူမလက်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏အမြင်များပြောင်းရွေ့အဖြစ်, ပြောင်းလဲနေသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုဆက်ခံကြည့်ဖို့ပုံကနေ, တဖြည်းဖြည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပုံ, တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တီဗီပုံရိပ်တွေနဲ့တူ.
3: D Flip Effect
တဖြည်းဖြည်းအသွင်ပြောင်း, ပုံတစ်ပုံအားဖြင့်အခြားရုပ်ပုံဖျူး, မှော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖွဲ့စည်း.
3: D Morph Effect
အကွိမျမြားစှာဓါတ်ပုံတွေကိုတက်ဆင်းသို့မဟုတ် left နှင့်ညာဘက်အပြောင်းအလဲများ, ခဏခဏ 2-6 ပုံစံများအပြောင်းအလဲ. ရွေ့လျားနေသောသို့မဟုတ်ရှုထောင့်အရောင်များဖွဲ့စည်းရန်မည်သည့်အခါလက်စွဲ, ပုံရိပ်တွေနဲ့စာလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ပြန်ပေါ်လာ, ဒီသက်ရောက်မှုကိုမီနှင့်အပြီးအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်ရန်အကြောင်းမရှိများ၏စပ်လျဉ်းထံမှအချက်အလက်များ၏ပုံစံယူနိုင်ပါသည်.
ဤတွင်ကိုသာဘုံ 3D ပုံနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု lists, ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ကုမ္ပဏီများ, ဟိုတယ်များ, စူပါမားကက်, စျေးဝယ်မောလ်များ, ရေချိုးစင်တာများ, အများပြည်သူသောနေရာများ, ဖျော်ဖြေရေး, အိမ်မှာပုံစံမျိုးစက်မှုလုပ်ငန်း, ကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်း, ကုန်စည်စျေးကွက်, လက်မှုပညာနှင့်အခြားဆုလက်ဆောင်,စသည်တို့ကို.
လိမ္မော်ရောင်နှင့် OEM ထုတ်ကုန်များဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားအရသိရသည်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် 3D Lenticular Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, RFID 3D Proximity စမတ်ကဒ်, 3: D စတီရီယို Image ကိုကတ်, သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ် Card ကို
prev: စိတ်ကြိုက် NBS ခုံး Code ပလပ်စတစ်ကတ်
နောက်တစ်ခု: RFID စမတ်ကဒ်ဦး Disk ကို, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစမတ်ကဒ်
ဖောင်းကြွ Card ကို, micro-ကယ်ဆယ်ရေး Card ကို, RFID ဖောင်းကြွ Card ကို
RFID စမတ်ကဒ်ဦး Disk ကို, USB မှ Flash ကို Disk ကိုစမတ်ကဒ်
စိတ်ကြိုက် NBS ခုံး Code ပလပ်စတစ်ကတ်
RFID Card ကို (143)
ဆက်သွယ်ပါ Chip ကဒ် (6)
လုံခြုံရေး ID ကဒ် (5)
ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် (61)
HF Chip ကဒ် (29)
HID Card ကို (3)
EM ကဒ် / LF Card ကို (22)
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို (9)
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ် (15)
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို (12)
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို (5)
Carfts Card ကို (7)
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို (12)
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း (18)
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ (18)
RFID အင်းလေး (14)
Prelim အင်းလေး (3)
RFID Crystal Epoxy Tag ကို (6)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (70)
ရေချိုးခန်း Tag ကို (7)
အဝတ်အစား Tag ကို (5)
anti-သတ္တု Tag ကို (26)
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Anti-သတ္တုတံဆိပ်တပ်ရန် (2)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (17)
PCB Anti-သတ္တု Tag ကို (6)
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို (5)
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို (5)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (23)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (23)
လက်ပတ် / လက်ကောက် (25)
EAS Store ကိုနှိုးစက် (8)
LF / HF Reader ကို (26)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (17)
module / အင်တင်နာ (20)
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း (10)
Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက် (12)
ဆက်သွယ်ရန်ကဒ် Reader ကို (4)
ဓာတ်လှေကား Controller (4)
2.45GHz အမြန်နှုန်း Active ကိုထုတ်ကုန်များ (6)
Card ကိုပရင်တာ (6)
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ (9)
RFID Card ကို, စမတ် Tag ကို, CPU ကိုကတ်, အင်းလေး, RFID တိရိစ္ဆာန် Tag ကို, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, anti-သတ္တု Tag ကို
AIDC, E-လက်မှတ်, စတစ်ကာများ, RFID တံဆိပ်တပ်ရန်, NFC ကိုလက်ပတ်, Keychain, အချိန်တက်ရောက်, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်